ဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ဧည့်သည်အဖွဲတွေ့ မေခ၊ မလိခ မြစ်ဝှမ်း နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ ဆွေးနွေး | Moep1's Blog
This entry was posted on Saturday, February 28th, 2009 at 11:19 am and is filed under အထွေထွေ (General News).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.